Fọdụ ndụmọdụ maka MGSE na MATE na Linux Mint 12 | Site na Linux
Fọdụ ndụmọdụ maka MGSE na MATE na Linux Mint 12
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ọ bụrụ na ibudatara Mint 12 Mint Linux, M na-agwa gị na ndị nke Clement lefebvre na-egosi anyị otu esi eme ụfọdụ Atụmatụ iji gbanwee ahụmahụ nke MGSE y MGBE. Ka anyị lee ihe ha bụ.
1.1 Gbanwee na otu ogwe na elu.
1.2 Jiri ogwe, menu na ndepụta nke windo nwere agba gbara ọchịchịrị.
1.3 Ngwa ele faịlụ.
2.1 Wụnye MATE si n'ụdị CD.
2.2 Ngwọta mgbe ogwe aka MATS ga-akwụsị.
2.3 Nwunye na-erepịa 100% nke CPU.
Gbanwee na otu ogwe na elu.
Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịhụ, MGSE ndabara ọ na-enye anyị ogwe 2 (yiri Gnome 2) ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike na-eji otu panel na azụ ọzọ na ịke nke Gnome shei.
Nke mbu, anyi gbanyụọ ogwe nke ala:
Na menu, anyị na-eme ngwa ọrụ ahụ «Advanced Mmasị».
Anyị na-ahọrọ "Shell Extensions" ma ọ bụ "Shell Extensions".
Anyị na-achọ »N'okpuru ndọtị panel» (Ndabere Mgbatị Panel) anyị we gbanyụọ ya.
Mgbe ahụ, anyị reboot Gnome shei:
Anyị na-asọ "Alt F2".
Anyị na-ede «R» na anyị pịa Banye.
Jiri ogwe, menu na ndepụta nke windo nwere agba gbara ọchịchịrị.
Ugbu a na Mint 12 Mint Linux anyị nwere isiokwu abụọ maka Gnome-Shell: Mint-Z y Mint-Z-Nwa. Nke ikpeazụ bụ nke bịara na ndabara na Lisa's RC. Site na ndabara, ọ na-arụ ọrụ ugbu a Mint-Z nke nwere isi awọ ma ọ bụ ụda ọla ọcha (dabere na anya a hụrụ) 😀
Ka ịgbanwee n'etiti ha ma ọ bụ họrọ isiokwu ndị ọzọ:
Ka anyị gaa na ngwá ọrụ «Advanced Ntọala» na menu.
Pịa na «Gburugburu» (Okwu).
Anyị na-agbanwe uru nke "Okwu Shell" maka isiokwu anyi choro.
Ngwa ele faịlụ.
Mint 12 Mint Linux gụnyere ngwa akpọrọ "Sushi", nke bụ ihe ọ bụla karịa ihe nkiri faịlụ Nautilus, nke na-akwado Oyiyi, Egwu, Vidio, Akwụkwọ, PDF… Wdg. Ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, ọ ga-abụrịrị ihe dịka Nlele Gloobus, ebe ọ bụ na anyị ga-eji ya, anyị na-etinye onwe anyị na faịlụ ma pịa «Ogwe Ogwe»Iji lelee ya.
Wụnye MATE si n'ụdị CD.
Iji jiri MATE anyị ga-etinye ngwugwu ahụ "Mint-meta-nwunye".
Ngwọta mgbe ogwe aka MATS ga-akwụsị.
A ka nwere isiokwu ụfọdụ Gtk nke ahụ adabaghị na MGBE. Ọ bụrụ na nke a mee tụlee iji isiokwu abụọ na-arụ ọrụ zuru oke:
Nwunye na-erepịa 100% nke CPU.
Ọ bụ maka otu ihe ahụ mere ogwe ndị ahụ ga-apụ n'anya, n'ihi na anaghị akwado ụfọdụ isiokwu Gtk, ọzọ, tụlee iji abụọ ndị a:
E nwere ụzọ aghụghọ ndị ọzọ maka ndị mmepe ọkachasị ị nwere ike ịhụ na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Fọdụ ndụmọdụ maka MGSE na MATE na Linux Mint 12
Ajụjụ nke narị afọ bụ otu esi gbanyụọ panel Gnome? iji debe naanị ogwe ntụpọ.
Anọ m na-anwale Gnome 3 na Fedora 16 otu izu, ma ọ nweghị ụzọ.
M nwalere nsụgharị Mint a ka m hụ ma akwadoro maka ndị ọrụ ọhụụ. Ebe ọ bụ na m nwere afọ ojuju na Debian + gnome 2 dị na PC m na Xubuntu na netbook m.
Ezigbo ajụjụ. Echeghị m na ọ ga-ekwe omume, ma ọ bụrụ na ọ dị, ọ ga-abụrịrị nhọrọ zoro ezo nke ọma.
Nwere ike ịbanye na nwunye, nke bụ kpochapụwo gnome 2 menu
Ezigbo ndụmọdụ dị mma iji tinye ihe niile n'elu menu.
You maara ma ọrụ MGSE nke na-eme ka menu ahụ mepee mgbe m tinyere pointer pointer na akuku aka ekpe nwere ike nkwarụ n'ụzọ ọ bụla? Ọ bụ nzuzu, mana enweghị m ike ịhụ ebe ọ bụla iji gbanyụọ ya.
Ekele na ekele maka ihe niile.
Echeghị m na ị nwere ike, ọbụlagodi na MGSE. Ọrụ a bụ Gnome-Shell na-eweta site na mba ka ihe wee sie ike.
Echiche nke iji gnome bụ n'ihi ntụgharị nke ogwe ……. Na ndị gara aga enwere m ike itinye nyocha ntanetị, mkpọka, amụma ihu igwe, njikwa windo, onye na-achọpụta akwụkwọ ozi, ihe niile ruru otu ntinye, 12 a nwere Unity na-enweghị akụkụ ụgbọ mmiri! ihe mere m ji hapụ Ubuntu ma wụnye debian 6) mgbe ahụ mgbe m na-agụ ihe niile gnome nwere, ekpebiri m ịnwale Mint na achọpụtara m na ọ nwere otu nsogbu ahụ dị ka ubuntu otu ogwe osisi abụọ na-abụghị ihe ọ bụla karịa ogwe isi awọ abụọ ihe niile, belụsọ ịnwe oghere na ịdị n'otu ……….
Ka o sina dị, enwere m ndakpọ olileanya, echere m na Mint bụ mbipute nke ubuntu
(edozi ya maka ojiji na-agbanwe agbanwe, na-ewepu ịdị n'otu, nke kpatara oke ọpụpụ nke ndị ọrụ na sistemụ ndị ọzọ)
Aga m aga n'ihu na Debian 6
Kedu otu ị si eme Debian 6?
M na-atụ uche Gnome m hụrụ n'anya 2. Echere m na Gnome ewerela ụzọ na-ezighi ezi, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọghị ime ka ndụ anyị sie ike hapụ Ubuntu n'ihi Unitydị n'Otu, iji chọta desktọọpụ yiri nke anyị si na ya gbapụ na obere ma ọ bụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ekwe omume customization.
Gnome 2 bụ ihe nhazi desktọọpụ maka onye ọrụ n'ụkwụ, ma ugbu a, na 3, anyị aghọwo ahụhụ na-enupụ isi na nke nnupụisi.
Obi abụọ adịghị m na ụdị scrtoria a nwere ike ịdị mma maka ekwentị mkpanaaka, netwọkụ na ụdị anụmanụ ndị ọzọ, mana maka PC na laptọọpụ, ọ bụghị.
Ndi Ubuntu, LinuxMint na Gnome biko gbalịa iche echiche dika onye onodu gi, ma oburu na ichughi Linux.
Reply to ozozo
Ndewo na nnabata 😀
Echeghị m na ha na-egbu Linux n'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ... Mate (ndụdụ nke Gnome2), KDE, Xfce, na ọtụtụ ndị ọzọ ... ọ bụghị ihe niile ka achikọtara na Unity na Gnome3 😉
Gbalịa Linux Mint Debian Edition LMDE. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ihe niile ịchọrọ, malite na Compiz. Ọ bụ ntutu na-adịghị mma, mana ozugbo ịhazigharị ya, ịlaghachi Gnome3 ruo mgbe ị ga-ahụ ihe ha ga-eme na LMDE. (Ọ bụ a version Rolling ntọhapụ).
Ezi ndụmọdụ dị mma, na-enweghị oge ọ bụla, distro kachasị mma m gbalịrị ...
Kedu maka, enwere m ọtụtụ nsogbu ịhazi na ịhazi Ubuntu 11.04 na 11.10 yana na 11.10 atụfuru m eserese eserese na enweghị m ike ịnweta ya ọzọ, yabụ ahọpụtara m ịwụnye lint mint 12 lisa ebe m lere anya n'ọtụtụ ọgbakọ na ha na-edozi ya. na-arụ ọrụ nke ọma, na onwe m abụghị onye ọkachamara ma ọlị ma ọ bụrụ na ọ dị m mma, naanị ihe m na-enweghị ike ime bụ na menus dị oji na ihe niile ahaziri, ebe ọ bụ na mgbe m nwetara ntọala dị elu na shei ndọtị anaghị enye m nhọrọ ọ bụla ịhọrọ na n'otu ụzọ ahụ isiokwu dị na akụkụ okpokoro okpokoro anaghị egosipụta menu ma n'eziokwu ebe nhọrọ isiokwu shei nwere ihe ngosi dị n'ụdị triangle nwere mkpu akara n'ime ya ma echere m na ọ ga-enwerịrị njehie, nke ahụ bụ ihe m ga-achọ idozi, amaghị m ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịduzi m, yana ndọtị shei nke na-apụtaghị na isiokwu shei nke pụtara na akara ma ghara inye m nhọrọ, ma anaghị m ahụ nke ahụ Ha na-eji debian, achoro m imata uru o nwere, daalụ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike izipu m ozi site na e-mail.
Zaghachi Alejandro Velázquez
Iceweasel 8 dị na Debian Testing
Linux Mint 12 "Lisa" dị!